डिभोर्स भइसकेकी श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा धरानमा एक पक्राउ
डिभोर्स भइसकेकी श्रीमतीलाई ब’ला’त्कार गरेको आ’रोपमा धरानमा एक पक्राउ.
डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीलाई ब,ला,त्का’र गरेको आ’रोपमा सुनसरीको धरानबाट एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीलाई ब,ला,त्का,र गरेको आ’रोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले वडा नं. १५ निवासी भोजराज थापा ‘फडिन्द्र’लाई पक्राउ गरेको हो।
इप्रका धरानका डीएसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार पूर्वपत्नीलाई क,र,णी गरेको उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन्। उक्त घ’टना यही बिहीबार भएको बताइएको छ। पीडितका छोराछोरी दुवैले घ’टनाबारे पनि बयान दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको डिएसपी कुँवरले बताएका छन्।
‘उनीहरुबीच डिभोर्स भइसकेको हो । तर, ज,वरजस्तीक,र,णी गरेको उजुरी परेको छ’, उनले भने, ‘छोराछोरीले समेत घ’टना भएको बताएकाले पक्राउ गरेर अ’नुसन्धान भइरहेको छ।’ छोराछोरी अर्को कोठामा
सुतिरहेको बेला पूर्व पत्नीलाई उनले ज,वरज,स्ती गरेका थिए। उक्त कुरा देखेपछि छोराछोरीलेसमेत प्रहरीलाई बताएका थिए। प्रहरीले पी’डि’त महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
२०७८ कार्तिक १४, आईतवार १२:३१0Minutes 153 Views